Al-shabaab oo sheegtay in Weerar ka dhacay Gedo ay ku dishay Sarkaal Ciidan | Dayniile.com
Home Warkii Al-shabaab oo sheegtay in Weerar ka dhacay Gedo ay ku dishay Sarkaal...
Al-shabaab oo sheegtay in Weerar ka dhacay Gedo ay ku dishay Sarkaal Ciidan
Kooxo hubeysan ayaa xalay gudaha degmada Baardheere ee Gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya ku dilay Sarkaal la sheegay inuu ka tirsanaa Ciidamada Maamulka Jubbaland, sida ay ku warramayaan wararka halkaas laga helayo.
Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Jubbaland oo ay uga hadlayaan dilka loo geystay Sarkaalka lagu magacaabi jiray Xasan Inyow, waxaana xusid mudan in dhowr jeer oo horey Baardheere ay uga dhaceen weeraro ay geysteen Al-shabaab.
Previous articleMadaxweyne Axmed Qoorqoor oo magacaabay Guddi cusub (Wareegto)
Next articleMahdi Guulled oo mahadceliyay madaxdii iyo xukumadihii ka soo shaqeeyay guusha bada Soomaaliya.
Cali Yare Cali Maxoow ka yiri Shirka golaha wasiirada ee maanta
axmed shiikh - January 23, 2022 0
Mushkilad weyn ayay leedahay markii qof aan taariikhda iyo dhacdooyinkii dalka aan wax faham ah ka heysan Ummada la horkeeno. Waxaan is waydiiyay sida Golaha...
Stock market trends to keep an eye out for fluctuations: Market
Kolonyo uu la socday Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan oo la weeraray
Xasan Sheekh:-kulankii xalay waxa uu ahaa talaabo dhanka wanaagsan loo qaaday...
Soomaaliya & Jaamacadda Carabta oo ka wada hadlay Arrimo muhiim ah